विराटलक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड | गृहपृष्ठ
Home विराटलक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड
विराटलक्ष्मी विकास बैङ्क लिमिटेड
वर्गीकरण : क्षेत्रीय स्तरको विकास बैङ्क
मुख्य कार्यालय : विराटनगर, मोरङ
स्थापना : २०६२ वैशाख २८
सीईओ तथा अध्यक्ष : प्रभुप्रसाद पराजुली
शाखा कर्यालय : ११
संस्थापक : ६० प्रतिशत
सर्वसाधारण : ४० प्रतिशत
२०६२ वैशाख २८ देखि ‘ग’ वर्गको वित्तीय संस्थाका रूपमा सञ्चालित यो बैङ्कको मुख्य कार्यालय विराटनगरमा रहेको छ । यो वित्त कम्पनीबाट स्तरोन्नति भई पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रकै पहिलो विकास बैङ्कका रूपमा परिचित भएको हो । स्थापनाकालमा यस बैङ्कको अधिकृत पूँजी रू.४ करोड ५० लाख रहेको थियो भने जारी पूँजी रू. २ करोड २५ लाख थियो । पूर्वाञ्चलका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको संलग्नता रहेको यस बैङ्कले कोशी अञ्चलअन्तर्गत मोरङ र सुनसरी जिल्लाका साथै मेची अञ्चलको झापा जिल्लामा समेत आफ्नो सेवा विस्तार गरेको छ । बैङ्कले छोटो अवधिमा वित्तीय रूपमा पनि सफलता हासिल गर्दै गएको देखिन्छ । यो बैङ्कले आव ०६६/६७ को मुनाफा तथा जगेडाबाट लगानीकर्ताहरूलाई २३ दशमलव ७५ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गरेको थियो । साथै, गत पुस २४ गते सम्पन्न बैङ्कको छैटौं वार्षिक साधारणसभाले चुक्ता पूँजी वृद्धि गर्न १ बराबर १ दशमलव ५ (१:१.५) को अनुपातमा हकप्रद शेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेअनुसार यही वैशाख २९ सम्म ९ लाख ७ हजार ५ सय कित्ता हकप्रद शेयर विक्री गरिरहेको छ ।
यस कम्पनीको १ सय ८० दिने शेयरमूल्यको ट्रेण्डलाई प्राविधिक विश्लेषणको औजार आरएसआई चार्टद्वारा हेर्दा यो कम्पनीको शेयरमूल्य न्युट्रल जोनमा रहेको छ । सन् २००९ नोभेम्बर १७ देखि हालसम्मको ट्रेण्डअनुसार अहिले आरएसआई रेखा न्युट्रल जोनभन्दा पनि तल ओभरसोल्ड जोनमा देखिएको छ । हालसम्म यो कम्पनीको आरएसआई स्केल ६० भन्दा माथि बढ्न सकेको छैन भने सबैभन्दा तल स्केल ९ सम्म पुगेको छ । त्यसअनुसार यो बैङ्कको शेयरमूल्य घट्दो चालमा नै धेरै रहेको देखिन्छ । हकप्रद शेयर विक्रीका लागि कम्पनीको शेयर दर्ता पुस्तिका बन्द हुँदा यसको शेयरमूल्य उच्च अङ्कले घटेको थियो । तर, अहिले यो कम्पनीको आरएसआई रेखा केही बढेर स्केल ३३ तिर उन्मुख देखिएकाले गर्दा शेयरमूल्यमा सामान्य सुधारको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
चालू आव ०६७/६८ को दोश्रो त्रैमासको अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार सो अवधिमा बैङ्कले रू. १ करोड ९० लाख खुद मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । सो रकम अघिल्लो आवको सोही अवधिका तुलनामा ३४ दशमलव ८७ प्रतिशतले बढी हो । त्यसैगरी, बैङ्कको जगेडा कोष अघिल्लो आवको यही अवधिको भन्दा ५९ दशमलव ६४ प्रतिशतको उच्च दरमा वृद्धि भएर हाल रू. २ करोड ९४ लाख पुगेको छ । साथै, सोही अवधिमा बैङ्कको निक्षेप ५० दशमलव ६३ प्रतिशतको वृद्धिसँगै रू. १ अर्ब ५८ करोड पुगेको देखिन्छ । तर, बैङ्कको लगानी भने २ दशमलव १५ प्रतिशतले घटेर अहिले रू. ५ करोड ११ लाखमा सीमित भएको छ । त्यसैगरी, सो अवधिमा बैङ्कको कर्जा तथा ऋण सापटी ५२ दशमलव १३ प्रतिशतले वृद्धि भएर हाल रू. १ अर्ब २१ करोड पुगेको छ । बैङ्कको निष्क्रिय कर्जा पनि गत आवको सोही अवधिको तुलनामा शून्य दशमलव ३७ प्रतिशत अङ्कले कम भएर अहिले शून्य दशमलव ८५ प्रतिशतमा झरेको छ ।
स्थापनाकालदेखि नै लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो प्रतिफल दिँदै आएको यस बैङ्कको वित्तीय अवस्थामा पनि राम्रो सुधार भइरहेको छ । बैङ्कको प्रतिशेयर आय, मूल्य-आम्दानी अनुपात र किताबी मूल्यमा उल्लेख्य सुधार हुँदै गएको छ । यस बैङ्कको हालको किताबी मूल्य रू. २ सय ८ दशमलव ५६ रहेको छ भने प्रतिशेयर आम्दानी रू. ३१ दशमलव ४४ तथा मूल्य-आम्दानी अनुपात ४ दशमलव ७१ रहेको छ । अन्य समकालीन तथा प्रतिस्पर्धी बैङ्कहरूको तुलनामा यस बैङ्कका वित्तीय परिसूचक एकदमै सकारात्मक देखिएका छन् । साथै, यसले लगानीकर्ताहरूलाई दिँदै आएको प्रतिफल पनि तुलनात्मक रूपमा राम्रो नै भएकाले गर्दा यो कम्पनीको शेयरमा लगानी गर्नु उपयुक्त नै देखिन्छ ।
वार्षिक शेयर कारोबार विश्लेषण:
यस कम्पनीको शेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा कमै कारोबार हुने गरेकाले लगानीकर्ताहरूले चाहेको समयमा किन्न र बेच्नका लागि असजिलो हुने देखिन्छ । यसले गर्दा आफूलाई चाहिएको समयमा उक्त कम्पनीको शेयरलाई सदुपयोग गर्न अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था रहेको देखिन्छ । फलस्वरूप, शेयरमूल्यमा कमै उतारचढाव आउने भएकाले गर्दा सट्टेवाजहरूले यस बैङ्कको शेयरमा लगानी गरी मुनाफा कमाउन सक्ने सम्भावना पनि कमै देखिन्छ ।